अमेरिकाका कारण विश्वभर कम्पन, बलिया अर्थतन्त्र पनि लरबराउन थाले....!
काठमाण्डौ । अमेरिकालाई विश्वकै महान देश बनाउने अभियानले विश्वका अधिकांश ठूला अर्थतन्त्रहरुमा कम्पन मच्चाइरहेको छ । ब्लुमबर्गमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार डलरको बढ्दो मूल्य, बढ्दो ब्याजदर तथा चीनसँग जारी अमेरिकाको व्यापार युद्धका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ कि यो वर्ष विश्वका कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक हुने...
स्वदेशी उद्योग बचाउन आयातमा कर बढाउने ट्रम्पको घोषणा: इयु, चीन, क्यानडा र मेक्सिको क्रुद्ध
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले स्टील तथा एल्युमिनियमको आयातमा करहरु बढाइने घोषणा गरेका छन्। ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी धातु व्यवसायीहरुसंगको बैठक पछि बोल्दै राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चीनको नाम त लिएनन्, तर विदेशी आयातले अमेरिकी उद्योगहरुलाई नोक्सान पुगिरहेको बताए। उनले, उनकै शब्दमा, दशकौंसम्म अरु मुलुकहरुको अनुचित व्यवहार भोगिरहेका...
डिभीचिठ्ठा बन्द नहुने, नेपालीलाई राहात
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिभी चिठ्ठामार्फत आप्रबासीहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने गरी विधेयक पारित गराउन खोजेको प्रयास असफल भएको छ । न्यूज एजेन्सीहरुका अनुसार डिभी चिठ्ठा लगायतका बिषय समेटिएका चारवटा विधेय अमेरिकी संसदले अस्वीकृत गरिदिएपछि ट्रम्पको यस्तो चाहनामा ब्रेक लागेको हो । ट्रम्प सरकारले...
डिभी चिठ्ठा कार्यक्रम रद्ध हुनसक्ने, ट्रम्पले थाले खारेजीको प्रक्रिया
काठमाण्डौ । अमेरिकाले वर्षेनी विभिन्न देशका नागरिकहरुका लागि खुलाउँदै आएको डिभी चिठ्ठाको कार्यक्रम रद्ध हुनसक्ने संभावना बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पले बुधबार बसेको ह्वाइट हाउसमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकमा डिभी चिठ्ठा कार्यक्रम खारेजीको प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बुुधबार न्यूूयोर्कमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा डिभी...
काठमाण्डौ । अमेरिकाको स्थायी भिजा(ग्रीन कार्ड) प्राप्तिको इच्छा राख्नेहरुलाई थप मुश्किल पर्ने भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले ग्रीन कार्डका लागि आवेदन गर्ने प्रत्येकसँग अब विशेष अन्तरवार्ता लिनेछन् । यो प्रक्रियाले भिजा आवेदन प्रक्रियाको गति निकै ढिलो हुनसक्ने र ग्रीन पाउने समग्र प्रक्रिया नै थप कठीन बन्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ...
ट्रम्पको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको साथ, ६ देशका नागरिकलार्इ अमेरिका जान प्रतिवन्ध
वासिङटन। अन्ततः अमेरिकाले मुस्लिम बाहुल्य रहेका विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाँच महिना अघिदेखि नै सो कानुनको घोषणा गरेका थिए। तर अमेरिकाका अधिकारवादी र अदालतको विरोधका कारण ती देशका नागरिक र शरणार्थीमाथिको यात्रा प्रतिबन्धको कानुनको कार्यान्वयन हुन सकेको...
सदनमा ट्रम्पलाई पहिलो झट्का, आफ्नै पार्टीबाट असहयोग
न्युयोर्क । आफ्नै पार्टी रिपब्लिकनका कांग्रेस म्यानहरुले असहयोग गर्ने निश्चित भएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनमा कांग्रेसमा प्रस्तावित हेल्थ केयर विधेयक शुक्रबार फिर्ता गरिएको छ । पहिलो महत्वपूर्ण विधेयकको फिर्तालाई ट्रम्प प्रशासनकै ठूलो असफलताको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । सात बर्षदेखि अमेरिकी अनुदारवादी राजनीतिको...
ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन जादूटूना, धार्मिक युद्ध हुनसक्ने !
काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अधिकतर विरोधीहरुलाई ट्रम्प ह्वाइटहाउसबाट बहिर्गमन हुन अझ ४ वर्ष लाग्छ भन्ने कुरामा निश्चिन्त छन् । तर अमेरिकामा जादूटूनामा विश्वास गर्ने कतिपय महिलाहरुलाई भने यस्तो लाग्दैन । उनीहरु जादूटुना गरेरै भए पनि ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसबाट लखेट्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन । यही उद्देश्यले...
ट्रम्पविरुद्ध हड्तालमा उत्रने १ सय बढी कर्मचारीको जागिर चट्
काठमाण्डौ । अमेरिकी संचारमाध्यमहरुका अनुसार अमेरिकामा पछिल्लो साता प्रवासीहरुको समर्थनमा आयोजित हड्तालमा सामेल १ सय भन्दा बढी कर्मचारीलाई डोनाल्ड ट्रम्पको दवाबमा बर्खास्त गरिएको छ । अमेरिकामा गत बिहीबार देशमा प्रवासीहरुको योगदानलाई दर्शाउनका लागि ‘डे विदआउट इमीग्रेन्ट्स’ नामको एक प्रदर्शन भएको थियो । यो प्रदर्शनमा समर्थन...
डलरको मजबुतीले ट्रम्पलाई निद्रा लागेन, राति ३ बजे सुरक्षा सल्लाहकारलाई फोन
काठमाण्डौ । अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राति ३ बजे राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक फ्लिनलाई फोन गरेर देशका लागि डलर मजबुत हुँदा फाइदा हुन्छ कि घाटा भनेर सोधेका छन् । अमेरिकाको न्यूज पोर्टल हफिङ्ग्टन पोस्टमा छापिएको एक खबरका अनुसार ट्रम्पले राति ३ बजे फोन गरेर आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकारलाई यस्तो प्रश्न सोधेका हुन् ।...
अमेरिका जानेले सोसल मिडियाको पासवर्ड दिनुपर्ने !
काठमाण्डौ । अमेरिका जान खोज्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने अब तपाईले आफ्ना भिजा अधिकारीलाई आफ्नो सोसल मिडिया अकाउण्टको पासवर्ड दिनुपर्ने हुनसक्छ । अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागका सेक्रेटरी जोन केलीले अमेरिका आउन चाहनेको सोसल मिडियाको अकाउण्टबाट उसको पृष्ठभूमिको बिषयमा जान्न सहज हुने बताएका छन् । केलीले हाउस होमल्याण्ड...